Aqalka Sare oo maanta faahfaahinaya safarkii Guddoomiyaha Golaha ee Kismaayo – Kalfadhi
Aqalka Sare oo maanta faahfaahinaya safarkii Guddoomiyaha Golaha ee Kismaayo
Guddiga Joogtada ah ee Golaha Aqalka Sare ayaa maanta lagu wadaa iney kulan ku yeeshaan Xarunta Golaha ee magaalada Muqdisho. Kulanka ayaa diiradda lagu saari doonaa safarkii uu Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare, Cabdi Xaashi Cabdullaahi, ku soo bixiyey magaakada kismaayo ee xarunta ku-meel-gaarka Dowlad Goboleedka Jubbaland.
Guddoomiyaha Golaha ayaa lagu wadaa inuu Xubnaha Guddiga u faahfaahiyo wixii uu Jubbaland kala soo kulmay, kadibna uu Goluhu arrinkaas la wadaago warbaahinta. Guddoomiyaha Aqalka Sare ayaa u tagay Kismaayo, si uu Jubbaland uga dhaadhiciyo la shaqeynta Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS).
War 8-dii bishan lagu daabacay SONNA ayaa lagu sheegay inuu Madaxweyne Kuxigeenka 1-aad ee Jubbaland, Maxamuud Sayid Aadan, sheegay iney soo dhaweynayaan ujeeddooyinka uu xambaarsan yahay safarka uu Guddoomiye Cabdi Xaashi ku tagay magaalada Kismaayo, iyada oo uu Guddoomiyaha Aqalka Sare ku faraxay iney Jubbaland u dhega-nuglaatay soojeedinta ah in la isu soo dummo iyada iyo DFS.
Kulanka Guddiga Joogtada ah ee Golaha, waxaa kaloo maanta la iskula soo qaadi doonaa safarkii Guddoomiye Cabdi Xaashi iyo wafdi uu hogaaminayey ay ku tageen dalka Turkiga, halkaas oo ay uga soo qeyb-galeen shirar ay Xubnaha Baarlamaanka Aduunka ku lahaayeen, Xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliyana ay qeyb ka ahaayeen.
Waxaa, sidoo kale, la filayaa in kulanka maanta lagu go’aamiyo ajandaha kulanka Golaha ee soo socda, iyada oo ay Aqalka hor yaalaan Hindise Sharciyeedyo uu soo meel-mariyey Golaha Shacabka, sida kan Xaq-siinta Siyaasiyiinta Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS).
Xildhibaan ku eedeynaya Xukumadda iney diidan tahay shaqada Guddiga Maaliyadda
Baarlamaanka Hirshabeelle oo go’aan ka qaadanaya colaadaha sokeeye ee gobolkaas